नवराज बिक बारे, रबी लामिछाने र सरु सुनार लाई चर्चित खल्नायकले दिय एस्तो सन्देश ? तुरुन्त हेर्नुहोस् - e-Sidha Nepal
नवराज बिक बारे, रबी लामिछाने र सरु सुनार लाई चर्चित खल्नायकले दिय एस्तो सन्देश ? तुरुन्त हेर्नुहोस्
हाम्रो संवाददाता १८ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०४:५२
नवराज बिक बारे, रबी लामिछाने र सरु सुनार लाई चर्चित खल्नायकले दिय एस्तो सन्देश ? तुरुन्त हेर्नुहोस्रु कुमपश्चिमको चौरहारीमा शनिबार भएको घट’नामा मृ’तक सबैको टाउकोमा चोट देखिएको छ ।बिहीबारसम्म फेला परेका पाँच जना मृत’कको टाउको’मा चो’ट लागेको पाइएको हो । स्थानीयले फेला पारेका सबैको शवका टाउ’कोमा चो’ट रहेको बताएका छन् । घट’नामा बेपत्ता भएका थप एक जना मृ’त अवस्थामा फेला परेका छन् ।भेरी नगरपालिका–४ खलंगाका १९ वर्षीय सञ्जु विकको शव घटनास्थलदेखि करिब ४० किलोमिटर जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका १३ कालाभुर नजिक भेरी नदीको खोचमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर श्रेष्ठले बताए ।
खोजीमा संलग्न भेरी नगरपालिका ११ का मुक्ति आचार्यले शवको टाउको कुच्चिएको र अण्डकोष सुनिएको अवस्थामा फेला परेको बताए । भेरी नगरपालिका ११ का गोविन्द शाही अझै बेपत्ता छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाटअन्तत रुकुम जाजरकोट का’ण्ड पर्दाफास,यी पापी हरु ले पो मा’रेका रहेछन् सुस्माले नै खोलिन सबै बस्तबिकता ! पुरा हेर्नुहोस् भिडियो सहित…
हामिलाइ नराम्रो कमेन्ट गर्ने लाई ढु’ङ्गा ले हानेर मा’र्नु पर्छ !
भर्खरै नवराजकी प्रेमिका सुस्माका आमा बुवा पहिलो पटक मिडियामा हेर्नुस गोप्य कुरा बाहिरियो !
सुष्मा मल्लका भाई पहिलाे पटक मिडियामा: नवराज बारे यति ठुलाे खुलासा,.. हेर्नुहोस पुरा भिडियो सहित